အကယ်၍ သင်သည် iPhone နောက်ဘက်ဖန်ခွက်ကိုချိုးဖဲ့ပါက Apple က၎င်းကိုအစားထိုးနိုင်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတောင်မစဉ်းစားချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကငါတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးအသစ်စက်စက် iPhone 12 မြေပေါ်လဲကျသွားပြီးနောက်ဘက်ဖန်ကွဲပြတ်တောက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင် Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလုံးအစားထိုးရန်သာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်.
ဆိုလိုသည်မှာယနေ့ကံမကောင်းသောသုံးစွဲသူများသည်ဤနောက်ဘက်အပိုင်းကိုချိုးဖျက်သည် သူတို့ကပစ္စည်းကိရိယာများကိုအစားထိုးသာအရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြသည် တစ်ခုလုံး Apple မှပေးပို့သောနှင့်လူသိများသောဝဘ်မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် MacRumorsApple က iPhone 12 ၏နောက်ကျောကိုဖောက်သည်အားပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Face ID ပြသနာကိုအဖြေရှာခြင်းအပြင် Motherboard နှင့်အခြားအတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို iPhone ဖောက်သည်အားတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲလဲလှယ်နိုင်သည်။
ယုတ္တိနည်း အကယ်၍ iPhone 12 သည်နောက်ဖန်ပြတ်ကျခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ပြhasနာတစ်ခုရှိပါက Genius က၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးလိမ့်မည် ပြီးတော့ iPhone ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ရန်အက်ပဲလ်သည်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲစက်ရုံသို့ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုပို့ရန် terminal ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်စျေးကွက်သို့ပြန်လည်တင်ပို့သည်။
၎င်းသည် "iPhone Rear System" အသစ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ပေါက်ကြားခဲ့သည့်စာရွက်စာတမ်းအား Genius Bars နှင့် Apple Authorized Service Providers (AASP) သို့ပို့လိုက်ခြင်းကြောင့်ဤ "iPhone Rear System" သည် iPhone 12 mini နှင့် iPhone 12 သုံးစွဲသူများအား terminal တစ်ခုလုံးကိုမပို့ပဲနှင့်မပြောင်းလဲဘဲပြင်ဆင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အက်ပဲလ်ကပြောတဲ့အတိုင်းရှင်းပြဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ပြုပြင်နည်းအသစ်ကဖြစ်လိမ့်မယ် iPhone 12 mini နှင့် iPhone 12 ကိုရောင်းချသောနိုင်ငံအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် iPhone 12 Pro နှင့် iPhone 12 Pro Max အကြောင်းဘာမှမပြောသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်အသစ်သို့မ ၀ င်ဟုထင်ရသည်။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone ကို 12 » အကယ်၍ သင်သည် iPhone 12 ၏နောက်ဘက်ဖန်ခွက်ကိုချိုးဖျက်လိုက်လျှင် Apple ကအစားထိုးနိုင်သည်
အိုင်ဖုန်း 13 တွင် "Always On" လုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအယူအဆတစ်ခုကပြသည်